မော်စကိုအနေနဲ့ Aeroflot SSJ ၏လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကအနည်းဆုံး 41 သေလွန်သောသူတို့သည် (ဗီဒီယို) - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Autres • ပုံမှန်မဟုတ်သော "မော်စကို SSJ Aeroflot ၏ပျက်စီးမှုကိုအနည်းဆုံး 41 သေလွန်သောသူတို့သည် (ဗီဒီယို)
မော်စကိုအနေနဲ့ Aeroflot SSJ ၏လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကအနည်းဆုံး 41 သေလွန်သောသူတို့သည် (ဗီဒီယို)
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang6မေလ 2019
Un Superjet 100 လကွောငျး Aeroflotဖျော်ဖြေ အရေးပေါ်ဆင်းသက် à မော်စကို ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်လူများကအနည်းဆုံး 41 78 ၏သေစေ, မီးတောက်သို့ပြင်းစွာတိုက်။
ဖျော်ဖြေရုရှားအမျိုးသားရေးကုမ္ပဏီ၏ SSJ100-95 လေယာဉ်ခရီးစဉ် SU1492 ၏4မေလ 2019 ချွတ် မော်စကို-Sheremetyevo လေဆိပ်မှ Murmanskပုံတစ်အာဏာကိုချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ဒါပေမဲ့အလျင်အမြန် Starting Point သို့ရောက်ပြီအရေးပေါ်ဆင်းသက်စေဟုမေး၏။ မတော်တဆမှုများ၏ဗီဒီယို Single-တန်းမှာပြသပုံပေါ် ရုတ်တရက်ခုန်လွှား ပထမဦးဆုံးအထိခိုက်, ထို့နောက်ဆင်းသက်ဂီယာပြိုကျခြင်းနှင့်ပုံတင့်ကားအသေခံပြီးနောက်အင်ဂျင်မီးရှို့။ အဆိုပါယူနစ်နောက်ဆုံးတွင်ရေရှည်မှာပြီးနောက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေသို့ရောက် လာ. , ထိုမတိုင်မီဆလိုက်များနှင့်မီးသတ်သမားတဆင့်ထွက်ပြေးလာသူအများအပြားခရီးသည်နောက်ဆုံးမှာ 45 မိနစ်အကြာတွင်မီးငြိမ်းသတ်။
အစီရင်ခံတစ်ဦးကပထမဦးဆုံးအကဲဖြတ် အသတ်ခံ 41 ကလူ ပေါ်ပျက်ကျ 73 ခရီးသည်ငါးအမှုထမ်းအဖွဲ့ဝင် ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်ပုံသားကောင်များအကြားသုံး PNC Aeroflot တဦး။ အဆိုပါလေကြောင်းလိုင်းက "အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတစ်ဦးယာဉ်အမှုထမ်းများက 55 စက္ကန့်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ဟုဆိုသည် ခရီးသည်ကယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုအမှုကိုပြုတော်မူပြီးမှ "ဒီကပ္ပတိန်က Denis Evdokimov ဖြစ်ခြင်း" လေယာဉ်မှထွက်ရန်ကနောက်ဆုံး "။ အဆိုပါ 33 အားလုံးခရီးသည်ကျန်ရစ်သူဆေးရုံတင်ငါးခုအပါအဝင်တနင်္ဂနွေညဥ့် Aeroflot ထုတ်ဝေသောစာရင်းတစ်ခုအရသိရသည်ရုရှားအမည်များကိုဝတ်ဆင်။
လေယာဉ်မှူးများကမှတဆင့်ကူးစက်သောအဆိုပါဒုက္ခဆင်းရဲမက်ဆေ့ခ်ျကိုတစ်ဦးနောက်ကိုလိုက်မယ်လို့ ပါဝါပြတ်တောက် မကြာမီ takeoff ပြီးနောက်လျှပ်စီးသပိတ်၏ပထမဦးဆုံးကောလာဟလများအားဖြင့်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ ဒါဟာဝေးစောလွန်း SSJ100 ၏သက်ရောက်မှု၏ခိုင်မာသောရှင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Une ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေး "ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများချိုးဖောက်မှု" လေကောင်းလေယာဉ်မတော်တဆမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီထံမှတစ်ဦးကကြေညာချက်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Aeroflot ချက်ချင်းထူထောင်တဲ့ အကြပ်အတည်း CEO ဖြစ်သူဗီ Saveliev ကဦးဆောင်။ သားကောင်များ၏ဆွေမျိုးသားချင်းသနားမော်စကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပါလိမ့်မည်, သူကဆိုသည်။ ဆယ်ပါးလည့်, တနင်္လာနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်မနေ့ကနှင့်ခြောက်လရုရှားကုမ္ပဏီကနှောင့်နှေးလျှက်များစွာသောအခြားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ SSJ100-95, 95135 MSN89098 RA-ခဲ့ကြောင်း၎င်း၏လုပ်မှတ်ပုံတင် ဇွန်လ 2017 အတွက်ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ် ; ၎င်း၏မကြာသေးမီကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဧပြီလအစောပိုင်းကဖျော်ဖြေခဲ့ခြင်းနှင့်တနင်္ဂနွေပျက်ကျမှုသောနေ့၌ပြဿနာများမရှိဘဲသုံးလေယာဉ်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
; အဆိုပါ Superjet ယနေ့အထိလေးမတော်တဆမှုအတွက်တစ်ဦးတည်းသာသေတတ်သော, မေလ 45 2012 သေဆုံးသွားခဲ့သောအင်ဒိုနီးရှားအတွက်သရုပ်ပြပျံသန်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့မတော်တဆမှုစွပ်စွဲခဲ့သည် လူ့အမှား.
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း: အ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဖွင့်သောသူသည်လိုလားသူ Brexit ဖြစ်ပါသည်